Sida loo helo V Bucks lacag la’aan ah Nintendo Switch | Madasha Mobile
Haddii aad tahay ciyaaryahan Fortnite ah oo ku yaal madal Nintendo, waxaad jeclaan lahayd inaad ogaato sida loo helo Lacag V oo Bilaash ah oo loogu talagalay Nintendo Switch, runta ?. Waxaa laga yaabaa inaad wax ku iibsato Nintendo Switch maxaa yeelay waxaad tahay taageere Fortnite waxaadna dooneysaa inaad awoodo inaad ka ciyaarto meel kasta iyo waqti kasta, ma aha go'aan xun. Hadda waa inaad barataa sida loo helo lacagta dalwaddii ah ee ciyaarta ugu caansan noocyada dagaalka royale. Taasina waa waxa aan isku dayi doonno inaan ku sameyno maqaalkan.
Xitaa haddii aad ku cusub tahay dagaalka royale, mar haddii aad ku dhex milmayso is-dhexgalka waxaad ogaan doontaa inay jiraan V-Bucks. Hadda waxaad la yaabi kartaa maxay u yihiin iyo gaar ahaan haddii ay jirto si kasta oo lacag la'aan looga helo Nintendo Switch maxaa yeelay waxaad aragtay inay qiimo leeyihiin. Haddii aadan aqoon sida loo helo iyo waxa ay yihiin, waxay aad u fiicnaan doontaa inaad akhrido maqaalkan oo dhan. Haddii aad cusub tahay ama aad tahay ruug -caddaa, waxaad heli doontaa xeelado yaryar oo laga yaabo inaadan hore u aqoon. Markaa ha ku lumin bartaada boostada.
Waxaan kaaga digeynaa inaad kaliya ku qasban tahay inaad raacdo tilmaamo ama talaabooyin dhowr ah oo taxaddar leh maxaa yeelay hareeraha qadaadiicdan waxaa jira khiyaano kale laakiin waxaan kaa caawin doonaa inaad aqoonsato maxaa yeelay waxaan kaliya adeegsan doonnaa habab rasmi ah oo la xaqiijiyay. Sidaa darteed, waxaan halkaas ugu soconnaa hagaha si aan uga helno V Bucks lacag la’aan ah Nintendo Switch.
1 Sida loo helo V Bucks lacag la’aan ah Nintendo Switch?
1.1 Hel Bucks V oo bilaash ah
1.2 Siyaabo kale oo lagu helo V Bucks on Nintendo Switch iyo Fortnite
Sida loo helo V Bucks lacag la’aan ah Nintendo Switch?
Runtu waxay tahay inaan kuu sheegno, ha welwelin, laakiin waxa ugu fiican ayaa ah in marka hore aad fahanto waxa la qaban karo iyo maxay yihiin V Bucks of Fortnite. Markaad ogaato sida ay u shaqeyso lacagta dalwaddu ee dagaalka royale, waxaan sii wadi karnaa inaan isku dayno inaan lacag la'aan ku helno.
Soo koobitaan deg-deg ah, lacagta V Bucks waxaa loo isticmaalaa in lagu iibsado inta badan hargaha ciyaarta, laakiin sidoo kale Fortnite wuxuu muujiyaa ama cayaaraa. In kasta oo adeegsadayaal badani iibsadaan dhammaan qadaadiicdaas si ay u iibsadaan kaarka dagaalka oo si sax ah u kharash gareeya 950 V-Bucks iyo Xidhmada Dagaalka oo waliba qiimaheedu yahay 2800 V Bucks. Sidaa darteed, helitaanka lacagtan dalwaddu ee Fortnite waxay noqotaa mid aad muhiim u ah si aad u heshona waa inaad lacag gelisaa ama akhridaa maqaalkan si aad u hesho lacag la'aan, adigu go'aanso. Koontadaadu wax badan bay horumarin doontaa haddii aad isticmaasho V Bucks maxaa yeelay mar haddii aad haysato kaarka dagaalka waxaad sare u kici doontaa si dhakhso leh waxaadna heli doontaa abaalmarino gaar ah oo halkaas u yaal kuwa adeegsada kaarka dagaalka.
Markaad ogaato waxaad inta badan ku iibsan karto lacagtan iyo waxa ugu kirada badan, waxaan u gudbi doonnaa tilmaamaha si aad bilaash ugu hesho. Sababtoo ah ii sheeg inaadan rabin inaad ogaato sida loo helo V Bucks bilaash ah Nintendo Switch.
Hel Bucks V oo bilaash ah
Aan u gudubno qodobka. Si aad u hesho lacagta dalwaddii ee Fortnite, V Bucks -ka bilaashka ah ee Nintendo Switch -kaaga waxaa jira hab qumman oo aad ku heli karto iyo waliba adoo ciyaaraya. Sidaa darteed waxaad hore u taqaan wax kale, si aad u hesho shilimaad waa inaad ciyaartaa. Qaabka laga hadlayo waxaa lagu magacaabaa dagaal royale oo waxa uu ku weydiin doono ayaa ah inaad wajahayso pvp ka dhanka ah ciyaartoy kale oo ku jira qaabka ninka ugu dambeeya ciyaarta. Taasi waa, royale dagaal. Markaad dhex marto heerarka ku jira qaabka su'aasha, waxaad fahmi doontaa in badan oo aad ciyaarto, in badan ayaad awoodi doontaa inaad u hesho V Bucks koontadaada.
Si aad ula qabsato fikradda ilaa aysan waxba qaban waxaad heli kartaa 100 V Bucks oo ciyaaraya, gabi ahaanba waa bilaash oo aan gaadhin wax aan ahayn heerka 11. Markaa waxaad heli kartaa 100 V Bucks kale markaad gaadho heerka 34. Iyo abaalmarino kala duwan. Dhammaan abaalmarintan waxay ku kala duwan yihiin sida caadiga ah waxaana laga yaabaa inay is beddesho hal xilli illaa mid kale ama mid ka mid ah dhacdooyin kale laakiin waxaad awoodi doontaa inaad aragto wax kasta oo ku jira kaarka dagaalka.
Sababtoo ah waa sida ay tahay, haddii aad iibsato kaarka dagaalka waxaad awoodi doontaa inaad hesho V Bucks badan, aakhirka Way kuu fiicnaan doontaa inaad xoogaa maal gashato isla marka aad gasho Fortnite on Nintendo Switch. Sidii aan sheegnay, waxay ku kacaysaa 950 V Bucks iyo xirmada oo dhammaystiran qiimahoodu yahay 2800 V Bucks. Xaqiiqdii, haddii aad iibsato xirmaddan u dambaysa waxaad si toos ah ugu gudbi doontaa heerka 4 waxaadna marka hore kasban doontaa V Bucks kala duwan.
Taa bedelkeeda, haddii aadan maalgalin euro markii aad iibsaneyso Beddelka oo aad soo dejiso Fortnite oo aad damacsan tahay inaad waxyaalahan ku sameyso lacag la'aan, waxa dhacaya ayaa ah inaad soo daahayso oo xitaa laga yaabo inaad seegto xilli ka hor intaadan awoodin qaado dagaalka baas oo dhan. Sidaa darteed waxaad lumin doontaa si ka duwan V Bucks oo ka mid ah dhammaan abaalmarinnada dhaqdhaqaaqyada, hargaha iyo waxyaabaha kale ee caadiga ah ee Fortnite.
Waxaas oo dhan waa ikhtiyaari, taasi waa cad tahay. Uma baahnid inaad wax iibsato runtiina waxaad samayn karto haddii aad xor u tahay inaad ciyaarto waa badbaadin kuwa V Bucks si loogu maalgaliyo oo ugu dambayntii loo helo kaarka dagaalka ee bilaashka ah. Qaabkan waxaad ku heli doontaa dhammaan abaalmarinnada bilaashka ah Nintendo Switch.
Siyaabo kale oo lagu helo V Bucks on Nintendo Switch iyo Fortnite
Sida aan kuu sheegno marka laga reebo ciyaarista iyo ciyaarista ma jirto ikhtiyaar intaas ka badan haddii waxa aad rabto ay tahay inaad ka hesho V Bucks bilaash ah Nintendo Switch iyo Fortnite. Markaa ikhtiyaarka kale si aad u hesho lacagtan waa ficil ahaan iibsiga. Qaabkan uma noqon doontid xor u ciyaarista ciyaartoy laakiin wax badan ayaad hore u mari doontaa adigoo iibsanaya kaarka dagaalka xilli ciyaareed kasta. Dhab ahaantii haddii aad dheereyso ku filan iyo kirada waxaad heli doontaa dhammaan abaalmarinnada ee dagaalka laftiisa ayaa dhaafa. Markaa ha welwelin, waa arrin ciyaar.
Sidaa darteed, haddii aad doorato ikhtiyaarkan, waa inaad ogaataa qiimaha V Bucks ee Fortnite taasina waa waxa aan hadda kuu sheegi doonno:
1000 V Bucks ayaa lagu qiimeeyaa 9,99 €
2800 V Bucks ayaa lagu qiimeeyaa 24,99 €
5000 V Bucks ayaa lagu qiimeeyaa 39,99 €
13500 V Bucks ayaa lagu qiimeeyaa 99,99 €
Xidhmada weerarka gaduudan ee isqarxinta + 600 V Bucks ayaa lagu qiimeeyaa 4,99 €
Ugu dambayntii, waxay ku hadhay oo keliya in laguu sheego haddii aad wax iibsato, had iyo jeer ku samee Ciyaaraha Epic iyo dukaanka rasmiga ah ee Fortnite. Waxaa la ogyahay in ay jirto lacag badan oo burcad -badeedda lagu iibinayo lacagtaan taas oo ay ugu wacan tahay tirada ciyaartooyda uu leeyahay ciyaarta fiidiyaha, laakiin dhammaantood ma ahan kuwo la isku haleyn karo.
Waxaan rajeyneynaa in maqaalkani ku anfacay adiga iyo inaad hore u taqaan sida loo helo V Bucks lacag la’aan ah Nintendo Switch iyo Fortnite. Waxaan kugu arki doonaa qoraalka xiga ee Madasha Mobile -ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Ciyaaraha » Sida loo helo V Bucks lacag la’aan ah Nintendo Switch
Sida loo sameeyo goob goob ku taal Minecraft